Ihe I Ga-eme ma E Zitere Gị Ozi n’Ekwentị | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
IHE NDỊ MMADỤ NA-EMEKARỊ
Ọ bụrụ na gị na enyi gị na-akpa nkata, enyi gị ọzọ ezitere gị ozi n’ekwentị gị, gịnị ka i kwesịrị ime?
Gụọ ozi ahụ ka ị na-agwa enyi gị okwu.
Sị ya cheregodị ka ị gụọ ozi ahụ.
Hapụ ozi ahụ, kwuwenụ ihe unu na-ekwu.
Nke ọ bụla i kpebiri ime n’ime ihe atọ a nwere ihe o mere.
Ọ bụrụ na gị na enyi gị na-akparịta ụka gị ana-ede ozi ị ga-ezigara enyi gị ọzọ, ọ dị ka ebe mmadụ na-anya ụgbọala na-eri nri. Ị manụ na ọ dịghị mma. Ma, i nwere ike ịsị na ebe ha abụọ bụ enyi gị, o nweghị ihe o mere. Nke bụ́ eziokwu bụ na i kwesịrị ịkwanyere onye ahụ gị na ya na-ekwu okwu ùgwù. Ọ pụtaghị na ị gaghị eme ihe ọzọ ma gị na mmadụ na-akparịta ụka. Ma, cheta na ọ bụrụ na ị naghị akwanyere ndị enyi gị ùgwù, ọ gaghị ete aka ha agaghịzi abụ ndị enyi gị.
Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ? Ọ bụ maka na ndị mmadụ anaghị achọ ka ejiri ha na-eti epele. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Ugochi * sịrị, “Ọ na-ewe m iwe ma mụ na enyi m na-ekwu okwu ya ana-ele anya n’ekwentị ya ka à ga-asị na e nwere ihe ka mkpa ọ na-atụ anya ya.” Ì chere na Ugochi na ụdị onye ahụ ga-abụte enyi aka?
Ka ị na-echebara ihe ị na-eme ma gị na mmadụ na-ekwu okwu echiche, legodị anya n’ebe ahụ e dere “Ihe Ndị Mmadụ Na-emekarị.” Olee nke i chere dị mma? O doro anya na nke A adịghị mma. Gịnị ka i chere banyere nke B na nke CH? Ọ bụrụ na ị sị onye gị na ya na-ekwu okwu ya chere ka ị gụọ ozi e ziteere gị, ọ̀ dị njọ? Ọ bụrụkwanụ na ị hapụ ozi ahụ, gị na enyi gị ana-ekwu ihe unu na-ekwu, ọ̀ dị njọ?
Ị hụlanụ na o nwere ike isitụrụ anyị ike ịma ihe anyị ga-eme iji kwanyere ndị enyi anyị ùgwù. Ma, Baịbụl ga-enyere anyị aka. Ọ sịrị: “Otú unu chọrọ ka ndị mmadụ na-emeso unu, na-emesonụ ha otú ahụ.” (Luk 6:31) Ihe a Baịbụl kwuru nwere ike i nyere anyị aka mgbe anyị na-ede ozi na mgbe anyị na-agụ nke e ziteere anyị. Olee otú ọ ga-esi enyere anyị aka?
Mara mgbe i kwesịrị izigara mmadụ ozi. Nwa okorobịa aha ya bụ Izundụ sịrị: “Oge ụfọdụ, mmadụ na-ezitere m ozi na-enweghị isi n’ime abalị. Ụdị ozi ahụ na-akpọte m n’ụra.” Jụọ onwe gị, sị, ‘M̀ na-ezigara ndị mmadụ ozi mgbe ha kwesịrị ịna-ehi ụra?’—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ekliziastis 3:1.
Edela ihe ọ bụla sọrọ gị. Gị na mmadụ na-ekwu okwu, otú i si ekwu okwu, otú ihu gị dị na otú i si emegharị ahụ́ ga-enyere onye ahụ aka ịghọtakwu ihe ị na-ekwu. Ma, e nweghị otú onye ị na-edere ozi ga-esi ahụ ihe ndị a. Oleezi ihe i kwesịrị ime? Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Enyinne, sịrị: “Edela ihe ga-egosi na ị naghị akwanyere onye ahụ ùgwù. Jụọ onye ahụ otú o mere. Na-etinye ‘biko’ na ‘i meela’ n’ihe ị na-ede.”—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Kọlọsi 4:6.
Mara ihe i kwesịrị ime. Legodị anya n’ebe ahụ e dere “Ihe Ndị Mmadụ Na-emekarị.” Ọ bụrụ na e zitere gị ozi dị mkpa ị na-atụ anya ya, i nwere ike ịsị onye gị na ya na-ekwu okwu ya cheregodị ka ị gụọ ozi ahụ. Ma, i nwekwara ike ịgụ ozi ahụ ma e mechaa. Nwa agbọghọ dị afọ iri na asaa aha ya bụ Amaka, sịrị: “Ị ka nwere ike ịgụ ozi ahụ ma gị na enyi gị kwuchaa okwu. Ma, ọ bụrụ na ị hapụ enyi gị gụwa ozi ahụ, o nwere ike hapụ gị pụwa.” Ọ bụrụ na ị nọ ná nnọkọ, ọ ga-aka mma ka ị gụọ ozi ọ bụla e ziteere gị mgbe unu gbasara. Nwa agbọghọ dị afọ iri na asatọ aha ya bụ Nkechi, sịrị: “Ya abụla gị na ndị mmadụ na-ekwurịta okwu, gị ana-edegara ndị ọzọ ozi ma ọ bụ na-agụ nke e detaara gị. Ọ bụrụ na ị na-eme otú ahụ, ọ na-egosi na i jighị ndị mmadụ kpọrọ ihe.”
Chebara ihe i dere echiche tupu i zipụ ya. Oge ụfọdụ, mmadụ nwere ike ịghọtahie ozi i ziteere ya. Gịnị ga-enyere gị aka ide ozi gị otú ọ ga-edo mmadụ anya? Nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ na otu aha ya bụ Ụkachi, sịrị, “Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ide bụ ihe egwuregwu, dee ya otú onye ahụ ga-esi aghọta na ọ bụ ihe ọchị ka i ziteere ya. Iwe nwere ike iwe ụfọdụ ndị ma ọ bụdị ha abaa gị ọgụ ma ọ bụrụ na ha aghọtahie ihe i detaara ha.”—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 12:18.
Ị̀ hụlanụ na ihe i ji ekwentị gị na-eme mgbe gị na ndị enyi gị na-ekwu okwu nwere ike ime ka gị na ha dịkwuo ná mma ma ọ bụ kpatara gị nsogbu?
Ihe ị ga-echebara echiche: Ọ bụrụ na anyị hụrụ ndị mmadụ n’anya, anyị ga na-akpaso ha àgwà ọma. Olee ihe ga-egosi na anyị hụrụ ndị mmadụ n’anya? Baịbụl kwuru, sị: “Ịhụnanya nwere ogologo ntachi obi na obiọma. Ịhụnanya adịghị ekwo ekworo, ọ dịghị etu ọnụ, ọ dịghị afụli onwe ya elu, ọ dịghị akpa àgwà na-ekwesịghị ekwesị, ọ dịghị achọ ọdịmma nke ya, ọ dịghị abụ nke a kpasuru iwe.” (1 Ndị Kọrịnt 13:4, 5) Olee nke anyị kwesịrị imekwu nke ọma n’ime ihe ndị a Baịbụl kwuru?
^ para. 11 Aha a kpọrọ ụfọdụ ndị n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
“E nwere oge a kara aka maka ihe ọ bụla.”—Ekliziastis 3:1.
‘Ikwu okwu n’echeghị echiche dị ka ebe e ji mma agha maa mmadụ.’—Ilu 12:18.
“Ndị na-eto eto na-edekarị ihe na-adịghị mma n’ozi ha na-ezigara ndị ọzọ. Ha na-eche na o nweghị ihe o mere, ebe ọ bụ na ha dere ya ede ọ bụghị na ha ji ọnụ ha kwuo ya. Nke bụ́ eziokwu bụ na mmadụ ekwesịghị ịna-ekwu okwu rụrụ arụ ma ọ bụ dee ya ede.”
“Ebe ọ bụ na onye ị na-edegara ozi ahụ anọghị ebe ahụ, i nwere ike ide ihe na-adịghị mma. N’ihi ya, edela ihe ị ma na ị gaghị ekwuli n’ihu onye ahụ.”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Ị Ga-eme ma E Zitere Gị Ozi n’Ekwentị